Ozakwethu | Shandong Dingtaisheng Imishini Technology Co., Ltd.
I-Royal Foods VietNam Co., Ltd. ingomunye wabakhiqizi abakhulu be-Canned Sardine, iMackerel emazweni aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, ngaphansi kwegama lomkhiqizo elithi "Three Lady Cooks Brand" ebelaziwa umhlaba wonke futhi lithembekile.
IKhanh Hoa Salanganes Nest Company iyibhizinisi elihamba phambili ekuphathweni nasekuxhashazweni kwemithombo yemvelo engabizi kakhulu eVietNam. Ngeminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko esimeme, iKhanh Hoa Salanganes Nest Company ibilokhu yenza umzamo wokwenza futhi uhlukanise uhla lwemikhiqizo yayo ukuze ingenise imikhiqizo esezingeni eliphakeme emakethe futhi ilethe inani lokondleka esidlekeni se-salanganes kumakhasimende.
IMayora Group yabe isungulwa ngokusemthethweni ngonyaka we-1977 futhi kusukela lapho isikhule yaba yinkampani eyaziwayo emhlabeni wonke embonini yezimpahla ze-Fast Moving Consumer. Inhloso yeqembu leMayora ukuthi kube yindlela ekhethwa kakhulu yokudla nesiphuzo ngabathengi futhi inikeze inani elengeziwe kubabambiqhaza nakwimvelo.
Amaphiko amukelwa njengeqembu lebhizinisi elisungulwe kahle futhi elihlakaniphile e-Indonesia elinamandla athile ekwenziweni kwensipho nezinsipho. Imikhiqizo yama-Wings yaziwa ngekhwalithi yayo nokufinyeleleka kwayo, futhi iyatholakala kalula.
Ngenxa yemishini esezingeni eliphakeme ye-DTS kanye nomsebenzi ovelele, i-DTS ithole ukwethenjwa ngamaWings, ngo-2015, ama-Wings wethula ama-DTS retorts kanye ne-mixer yokupheka ukuze kusetshenzwe izikhwama zawo zesikhashana zokudla.
Njengomkhiqizi ohamba phambili waseThailand futhi othumela impahla esezingeni eliphakeme yemikhiqizo kakhukhunathi esemathinini, i-mfp ikhombisa ulayini womkhiqizo obanzi osukela kubisi lukakhukhunathi nokhilimu, ijusi likakhukhunathi, ukukhishwa kukakhukhunathi, kuya kumafutha kakhukhunathi ayintombi.
Njengamanje, inkampani ikhiqiza cishe i-100% yemali yayo evela ekuthekelweni kuya ezimakethe emhlabeni wonke - kufaka phakathi lezo eziseYurophu, e-Australasia, eMiddle East nasezifundeni zaseNyakatho Melika.
"I-EOAS" igama elifaniswa namafutha ezinongo kusukela ngo-1894. Kusukela ngo-1999 i-EOAS ibalwa njengomthumeli wamafutha obaluleke kunabo bonke eSri Lanka. Kusukela onyakeni ka-2017, i-EOAS ine-buniness entsha yobisi lukakhukhunathi olusemathinini.I-DTS inikezela ngezinsiza ezivela ku-filler seamer, i-retort, i-loader unloader dryer, i-labeler njll. ukunweba izimakethe zabo.
ICeylon Beverage Can yasungulwa ngonyaka we-2014 njengenkampani ezimele ye-aluminium futhi iqeda umenzi wayo oseColombo Sri Lanka. Ngephrojekthi yabo yekhofi ekheniwe i-OEM yeNestle, i-DTS enikeza ukubuyisa, ukulayishwa okugcwele okuzenzakalelayo, inqola kagesi njll.
IBrahim (uhlobo lweDewina Food Industries) ifana nokudla okumnandi, okulula, okulungele ukudliwa. Sibahlinzeka ngokuvalwa kwenzalo, esikhundleni salo mkhiqizo waseJapan. I-retort isebenzisa okuhle kakhulu futhi uma iqhathaniswa nomunye wabakhiqizi be-retort yaseJapan, ikhasimende liyayazisa kakhulu i-DTS njengoba ingezansi:
IDelta Food Industries FZC iyiFree Zone Company ezinze eSharjah Airport Free Zone, e-UAE esungulwe ngonyaka ka-2012. Uhla lomkhiqizo weDelta Food Industries FZC lubandakanya: Utamatisi Namathisela, Utamatisi Ketchup, Ubisi Oluhwamukile, Ukhilimu Oyinzalo, Isoso Elishisayo, Ubisi Olugcwele Lobisi, Ama-Oats, i-Cornstarch, ne-Custard Powder. I-DTS inikela ngamasethi amabili okufafaza amanzi ne-rotary retort yobisi oluhwamukile nolukhilimu.
Ngo-2019, i-DTS iwine iphrojekthi yokulungela ukuphuza yekhofi yenkampani yakwaNestlé Turkey OEM, ihlinzeka ngesethi ephelele yezinsiza zokubhoboza inzalo yokufafaza amanzi, nokuma ngomshini wokugcwalisa we-GEA e-Italy naseKrones eJalimane. Ithimba le-DTS lizanelisa ngokuqinile izidingo zekhwalithi yezinsizakusebenza, izixazululo eziqinile nezicophelelayo zobuchwepheshe, ekugcineni lithole udumo kwikhasimende lokugcina, ochwepheshe bakwaNestlé abavela e-United States naseNingizimu Melika.
I-Bonduelle bekungumkhiqizo wokuqala wemifino esetshenzisiwe eFrance ukwakha ulayini oyingqayizivele wesabelo esisodwa semifino ekheniwe ebizwa ngeBonduelle "Touche de," engadliwa kushisa noma kubanda. Umqhele usebenze ngokubambisana noBonduelle ukuthuthukisa lo mugqa owodwa wokupakisha wengxenye ofaka izinhlobo ezine zemifino: ubhontshisi obomvu, amakhowe, izinkukhu kanye nommbila omnandi.